Abantu abaninzi bajamelene neengxaki ezinjalo zesikhumba kwaye akusiwo wonke umntu owaziyo ukukhupha i-skin peeling. Kule nqaku siza kukuxelela malunga nezizathu zesikhumba se-peeling kwaye kukunceda ngeendlela zokupheka kunye nezilwanyana, esiza kuxoxa ngazo kwinqaku lethu.
Isizathu esona sizathu sokuba ulusu lube lukhuni ukungabikho kwamanzi.
Ukomiswa kwesikhumba sakho kunokukhokelela kunye nesepha ekhethiweyo, equka i-deodorizing and antimicrobial effects. Ngoko ukuze isikhumba sakho singagcini, khetha isepha kwisakhiwo esiza kubandakanywa, ioli yeoli kunye negalelo elikhulu leoli. Yaye isepha yakho ekhethiweyo kufuneka ibe neempawu ezinconyayo. Unokukhetha kwakhona isepha kwi-composition, eya kuba ngumxholo wekrimu. Kodwa ungasebenzisi isepha, equle i-lanolin, iyakwazi ukuvusa umonakalo owenzayo kwaye oko kubangela ukuba isikhumba sikhuphe.
Ukuba unesifo esikhuselekileyo, kwaye uhlala uqaphela ukuxubusha ezandleni nasebusweni, oko kubangelwa imbangela yokuxubha. Iingcali ezinjalo zicetyisa ukuba emva kokuhlamba okanye ukuhlamba ungasululanga ulusu ngelawula, kodwa uvele umanzi, ususe umswakama ongaphezulu. Ngaloo ndlela, awuyi kukulimaza iindawo eziphezulu ze-epidermis.
Ukukrazula ukukhwabanisa uya kuncedwa yizimonyo zokuphucula, okufuneka usebenzise rhoqo. Kukulungele ukukhetha ukwenziwa kweefom. Olu lwakhiwo ludala umqobo ongenamanzi phakathi komoya kunye nesikhumba. Ngaloo nto ikhusela ukukhuphuka komswakama, okuyimfuneko yesikhumba. Ungasebenzisa i-petroleum jelly eqhelekileyo ngokukhathala okuqinileyo. Ewe, ngokuqinisekileyo kuya kuba ngcono ukufuna uncedo kwi-dermatologist. Nguye kuphela onokukuthabatha ukunyamezela kunye neemollients.
Ukongezelela kwiimpawu zokunqanda ukukhawuleza, unokusebenzisa amayeza. Ukuba uguqula ulusu lwezandla zakho, unokukhetha ukhilimu nge-hydrocortisone. Faka isicelo kwisithintelo esingqongqo, kwaye emva kokusebenzisa ukhilimu, gqoba iiglavu zeplastiki uze ushiye ubusuku bonke.
Ungasebenzisa kwakhona ikhemishi ye-hydrocortisone kwiindawo ezinengxaki ebusweni, kodwa umxholo wayo kufuneka ube phantsi (0.5%). Le nkqubo kufuneka iqhutywe ngokuqhubekayo, iiveki ezingama-1-2, kodwa ingabi ngaphezu kweyodwa ngosuku. Ufanele ukwazi ukuba ukusebenzisa le mayeza awukwazi ukuyisebenzisa rhoqo.
Kukho neendlela eziqhelekileyo zokulawula i-peeling peeling. Amaski asebenzayo ngeoli ecocekileyo. Hlanganisa i-1 teaspoon yobusi kunye ne-1 ithispoon yeoli ye-alimondi kwaye uphathe umxube ovelisiweyo kunye neengxaki zakho. Shiya le mask imizuzu eyi-10 uze ususe nge-cotton swab. Kwakhona ungasebenzisa le mask kunye namanye amafutha, umzekelo ioli yeediliya, ioli yengqolowa yeoli kunye neoli ye-apricot.
Unokukrazula i-skin peeling nekhilimu enomsoco ongayenza ekhaya ngaphandle kweengxaki. Kule krimu uzakuyidinga i-teaspoon ye-honey kunye nepuniposi enye yebhotela elithambileyo kunye nepuni ye-pulp ephuma kwibhanana. Hlanganisa wonke umxube ngokufanelekileyo kwaye usebenzise lo mxube kwesikhumba. Kubalulekile ukuba ungayisebenzisi ngokunyakaza okulula, kodwa ngoncedo lweentshukumo zokuhamba. Gcoba lo mxube kwesikhumba malunga nemizuzu engama-20, uze uhlambe ngamanzi afudumele.
Musa ukuphuma ngaphandle ukuba nje uhlamba izandla kunye nobuso. Unako ukuphefumula indawo ezibonakalayo kwesikhumba kwaye ngaloo ndlela ubangela ukuba isikhumba sikhuphe.
Ngoku uyazi indlela yokulahla ukukhangela kwesikhumba kunye nendlela yokukhusela ukubonakala kwayo.
Shake kwaye usebenzise: I-Original Lancôme Juicy shaker lip icwecwe